Akhriso:- Qodobada uu u Cuskaday Siilaanyo in Loo dib loo Dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada
Madaxweynaha Maamulka Soomali-land Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa ka Hadlay sababaha ka dambeeyay in dib loo dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada maamulkaas oo xiligii la filaayay dib kaga dhacday.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silanyo go’aankii uu qaatay in uu dib u dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada, wuxuu ahaa go’aan uu si qoto dheer uga fikiray, sharci ah oo haysta taageerada bulshada isla markaana salka ku haya Distoorka Qaranka, duruufaha siyaasadeed iyo kuwa farsamo ee haatan ka jira Somaliland.
Arrinta dib-u-dhigista doorashooyinka Golaha Wakiillada, Madaxweynaha arrimaha uu ku go’aan qaatay waxa ka mid ahaa:
Ka dib markii uu cuskaday qaraarkii ay Maxkamadda Sare ee Distooriga ah ee ahi ka soo saartay doorashooyinkii Golaha Wakiillada ee 2005-tii, kaas oo nuxurkiisu ahaa in Saami Qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada ee xilligaa hal mar oo keliya doorasho lagu galo, wixii ka dambeeyana saami-qaybsiga lagu salayn doono tiro-koob guud oo dalka laga qabto,
Ka dib markii uu gar-waaqsaday saluuga ka soo yeedhay bulshada ku nool Gobollada Awdal, Sool, Sanaag iyo Maroodijeex iyo cabashada ay muujiyeen Haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee la xidhiidha saami-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada ee
Ka dib markii uu tix-raacay go’aankii ay wadajirka u soo saareen Axsaabta Qaranka ee ay Madaxweynaha kalsoonida buuxda ku siiyeen in uu go’aan ka gaadho arrinta Saam-qaybsiga Kuraasta Golaha Wakiillada, ka dib markii ay saddexda xisbi ku adkaatay in ay talo midaysan iyo xal rasmi ah ka gaadhaan,
Ka dib markii uu gar-waaqsaday baahida weyn ee loo qabo in ay dalka ka qabsoonto doorasho xor ah, xalaal ah oo ay bulshada ka wada qayb galaan,
Sidoo kale, waa arrin gar ah in ay muwaadiniintu helaan xuquuqdooda distooriga ah si ay ugu codayn karaan ciddii ay u doortaan inay iyaga u matalaan Golaha Wakiillada.
Hase ahaatee nuxurka iyo mucda arrintu maaha taa!! Arrintu waxay tahay: Ma waxaynu qabanaa doorasho muddaysan oo ay danaynayaan Bulshada Caalamku taas oo ku qabsoonta xilligii ay u qoondeeyeen? Mise waxaynu qabanaa doorasho xor ah, xalaal ah oo ay bulshada ka wada qayb galaan oo ku habboon wadciga, waayaha iyo duruufaha siyaasadeed ee ka jira dalkeena?
Arrimaha Qaranka Somaliland mudnaanta koowaad u lihi waa nabadda iyo xasiloonida, midnimada iyo wada-jirka ummadda, kuwaas ayaa saldhig u ah inay qabsoonto doorasho xor ah, xalaal ah oo ay bulshada iska wada dhex arkaan.
In dib loo dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada iyadoo la raacayo nidaamka iyo xeerarka u dhigan. Taasoo macnaheedu tahay in ugu horraan Madaxweynuhu qoraal Codsi ah u gudbiyo mudanayaasha Golaha Wakiillada si ay u ansixiyaan. Ansixinta kaddib, Madaxweynuhu qoraal u diri doona Maxkamadda Sare ee Distooriga ah ee , kaddibna waxa loo gudbin doonaa mudanayaasha Golaha Guurtida si ay uga soo talo bixiyaan,